तीन दलहरुबीच भएको सहमतिले सार्थकता पाउला ? « Nepal24Hours.com – 'Integration Through Media'
तीन दलहरुबीच भएको सहमतिले सार्थकता पाउला ?
८ बैशाख २०७२, मंगलवार १०:१९ मा प्रकाशित
काठमाण्डौ बैशाख ८ । प्रमुख दलहरूबीच विवाद भएको संघीयतालाई संविधानको अन्तिम मस्यौदामा परिमार्जन गरेर थप्ने गरी सहमति भएका विषय मस्यौदामा पठाउने सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान बसेको कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी शीर्ष नेताहरूको बैठकले लामो समयसम्म संविधानसभा अवरोध गर्दा जनतामा निराशा पैदा भएको भन्दै सहमति भएका विषय प्रक्रियामा लगेर विवादित विषयमा सहमतिको प्रयास गर्दै जाने निष्कर्ष निकालेको हो।
संविधानसभाको १० गतेको बैठकमा प्रक्रिया सुरु गरेर सहमति भएका विषय पारित गर्दै मस्यौदा समितिमा पठाउने र सहमति नभएका विषय मस्यौदा जनतामा गएर फेरि फर्किएपछि समावेश गर्ने बताइएको छ । यसमा माओवादी पनि सहमति जनाएको छ । यद्यपि, माओवादीले आफ्नो मोर्चामा छलफल गर्न केही समय माग गरेको पनि बताइएको छ । बैठकमा मधेसी मोर्चाबाट कोही पनि उपस्थित भएका थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला एक साता लामो इन्डोनेशिया भ्रमणमा भएकाले प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि मात्र त्यसले औपचारिकता पाउने देखिन्छ । त्यसो त, जाजरकोटमा फैलिएको रोगबाट सर्वसाधारणको मृत्यु भइरहेका अवस्थामा सरकारले खासै संवेदनशीलता देखाउन नसकेको भन्दै यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले लामो विदेश भ्रमण गर्नु उचित नभएको भन्दै यसको आलोचना समेत भइरहेको छ ।